कात्तिक १२, काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट्सको लिमिटेडको प्रस्तावित लाभांश सुरक्षित गर्ने कात्तिक १२ गते अन्तिम दिन रहेको छ ।
कम्पनीले प्रस्तावित लाभांश र आगामी साधारण सभा प्रयोजनका लागि कात्तिक १३ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने भएकाले असोज १२ गतेभित्र लाभांश सुरक्षित गर्नुपर्ने छ । बुक क्लोजको आधारमा कात्तिक १२ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
कम्पनीले यो वर्ष २४ दशमलव २१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्तावसहित कात्तिक २४ गते पाँचौ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । सभा कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंमा विहान ११ बजे शुरु हुनेछ । सभामा शेयरधनीहरुलाई जुममार्फत सहभागी गराईने कम्पनीले बताएको छ ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी हाल रू.४ अर्ब ४० करोड रहेको छ । सोहि पूँजीको आधारमा कम्पनीले २४ दशमलव २१ प्रतिशत नगद लाभांश दिन लागेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म रू. १ अर्ब ५ करोड ८४ लाख २९ हजार खुद नाफा गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू.२४ दशमलव शून्य ६ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २०३ दशमलव ४३ रहेको छ ।